सन्दिप लामिछाने अहिले सम्मको महँगो मूल्यमा सीपीएल टि-२० खेल्न छनौट !::Leading Nepal News
सन्दिप लामिछाने अहिले सम्मको महँगो मूल्यमा सीपीएल टि-२० खेल्न छनौट !
जेठ ०८, काठमाडौ । क्यारेबियन प्रिमियर लिग सीपीएल टि-२० को अक्सनमा नेपाली सन्दिप लामिछाने ठुलो मूल्यमा बिक्रि भएका छन्। प्रतियोगिताको लागि खेलाडी छनौट गर्न इंग्ल्याण्डमा जारि ड्राफ्ट मार्फत सन्दिपलाई बार्बाडोस ट्रिडेन्टसले टिममा लिएको हो। सीपीएल टि-२० को अघिल्लो सिजन सन्दिपलाई सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस प्याट्रीएट्सले खरिद गरेको थियो। यो सिजन सन्दिपलाई बार्बाडोसले ठुलो मूल्यमा टिममा लिएको छ। अघिल्लो सिजन ५ हजार डलरमा बिक्रि भएका नेपाली गुगली बलरले यो पटक ७० हजार डलर पाउनेछन्। नेपाली रुपैयाँमा सन्दिप ७८ लाख ९ हजार रुपैयाँमा बिक्रि भएका हुन्। सीपीएल ड्राफ्ट अन्तर्ग सन्दिप पाँचौ चरणमा चुनिएका हुन्।
सन्दिपले खेलेको विश्वभरको लिगमा अधिकारिक रुपमा घोषणा भएको मध्ये सन्दिपले पाएको यो सबैभन्दा धेरै मूल्य हो। बिग ब्यास लिगमा सन्दिपले ६०-७० हजार डलरको हाराहारीमा पाएको बताईए पनि अधिकारिक रुपमा भने मूल्य बाहिर आएको थिएन। इन्डियन प्रिमियर लिगमा सन्दिप गत सिजन २० लाख भारतीय रुपैयाँमा बिक्रि भएका थिए भने गत सिजन क्यारेबियन प्रिमियर लिगमा ५ हजार डलर तथा ग्लोबल टि-२० लिग क्यानडामा ४० हजार डलरमा ड्राफ्टबाट सन्दिप छानिएका थिए। यस्तै अफगानिस्तान प्रिमियर लिगमा उनले १५ हजार डलर तथा टि-२० लिगमा ३० हजार डलर मूल्य पाएका थिए। सन्दिपसंगै सीपीएल ड्राफ्टमा सोमपाल कामि, दिपेन्द्र ऐरी र रोहित पौडेल पनि रहेका छन् जसलाई हालसम्म कुनै टिमले लिएको छैन। सन्दिप बाहेक अन्य खेलाडी छनौट हुने सम्भावना भने कम मानिएको छ। ४ जना नेपाली खेलाडी सीपीएल ड्राफ्टमा परेको यो नै पहिलो पटक हो।सन्दिप बाहेक अन्य नेपाली खेलाडीहरु हालसम्म विदेशी लिग खेल्न छनौट भएका छैनन्।
सीपीएल टि-२० को अघिल्लो सिजन सन्दिपले ५ खेलमा कुल ७ विकेट लिएका थिए।यो सिजन क्यारेबियन प्रिमियर लिग अगस्ट २१ देखि सेप्टेम्बर २७ सम्म वेस्टइन्डिजमा आयोजना हुने बताईएको छ। सीपीएल ड्राफ्टमा कुल ५३६ जना खेलाडीहरु रहेका छन्। सन्दिप व्यक्तिगत भ्रमणको क्रममा अहिले अस्ट्रेलियामा रहेका छन्। आईपीएल खेलेपछि नेपाल फर्किएका सन्दिप १ हफ्ता बसाइँ पछि बुधबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। गत वर्ष इन्डियन प्रिमियर लिगमा दिल्लीको लागि छनौट भएपछि सन्दिप लगातार विदेशी लिग खेलीरहेका छन् यस क्रममा उनले बिग ब्यास, पाकिस्तान सुपर लिग, अफगानिस्तान प्रिमियर लिग, बंगलादेश प्रिमियर लिग , टि-२० लिग जस्ता प्रतियोगिता खेलीसकेका छन्।